Mpisolovava Rosia Fizahana - Moskoa Mpanelanelana Ny Fitsarana - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Mpisolovava Rosia Fizahana - Moskoa Mpanelanelana Ny Fitsarana
Raha toa ka ny farany dia tsy mihoatra ny
Ny Moskoa Mpanelanelana ny Fitsarana mandinika ny toe-javatra ao an-trano sy ny fitantanana ara-dalàna ny fitsarana izay ao anatin'ny ny fahefana, ny fiarovana ny zo sy ny tombontsoa ara-dalàna ny ara-dalàna ny fikambanana sy ny olona mpandraharaha, ary koa ny vahoaka fikambanana, olona tsy manana ny satan'ny tsirairay, mpandraharaha, teratany vahiny, ary hafa ny antoko, amin'ny toe-javatra toy nomen'ny lalànaMidika izany fa raha misy ny fanitsakitsahana ny ara-toekarena, na hafa ny zon'olombelona izay foto-kevitra ny fanelanelanana, vahiny olom-pirenena mandray anjara amin'ny raharaha eo an-daniny dia tsy maintsy manaiky porofo ny sata ara-dalàna ny fitsarana mpanelanelana, ankoatra ny hafa-taratasy. Milaza fa mety ho nametraka ny Moskoa Mpanelanelana ny Fitsarana ao amin'ny lapan'ny fitsarana amin'ny alatsinainy ny alakamisy miandry ao amin'ny filaharana. Ankoatra izany, ny dika mitovy amin'izany filazana izany dia tsy maintsy alefa, amin'ny alalan'ny voasoratra mail miaraka amin'ny fanaterana ny fandraisana ho mpikambana, ny antoko hafa tafiditra ao ny fifamaliana.
Io filazana na ny antontan-taratasy manamafy fa ny voampanga dia mahafantatra tsara ny eo am-piandrasana ny fifandirana dia tsy maintsy atolotra ho an'ny mpanelanelana miaraka amin'ny filazana.
Ankoatra izany, ny antontan-taratasy dia tsy maintsy omena manamarina ny fandoavana ny saram-pitsarana, miampy tahirin-kevitra manamafy ny toe-javatra izay nitondra ny mpitory mba hisoratra anarana ny fitarainana, ny dika mitovy ny orinasa ny taratasy fanamarinana ny fisoratana anarana sy ny isan'ny taratasy hafa. Ny habetsaky ny saram-pitsarana raha mitady fanampiana avy ny Mpanelanelana ny Fitsarana dia miankina amin'ny ny hifantoka amin'ny ady, fa ny eo ho eo ny vidin'ny dia, roubles. Na izany aza, fananana ara-filazana momba ny fanombanana, ary ny vola amin'ny saran'ny dia miankina amin'ny lanjany ny filazana. ny robla, ny saran'ny dia mitovy ny lanjan'ny ny milaza, fa tsy latsaky ny roubles. Raha ny zava-dehibe ny milaza fa mahatratra roa tapitrisa robla, maherin'ny roubles amin'ny saram-pitsarana ho takiana. Raha ny filazana dia nanaiky ny fitsarana, ny olona rehetra nandray anjara tamin'ny ady dia manana ny zo ho famerenana ny fitaovana mikasika ny raharaha. Mba hanaovana izany, ny mpanoratra ny fangatahana dia tsy maintsy alefa any amin'ny fitsarana. Ara-dalàna ny fizotry ny tantara ao amin'ny mpanelanelana amin'ny fifandirana dia natao teo ambany ny adversarial rafitra. Ny olona mandray anjara amin'ny raharaha dia efa mitovy zo sy ny andraikitra toy izany dia mety hijery ny fitaovana mikasika ny raharaha, ny rakitra fanoherana, hanolotra porofo, handray anjara amin'ny fanadihadiana fa ny porofo, dia mametraka fanontaniana hafa ireo mpandray anjara, sy ny famerenana fanangonan-tsonia napetraky ny olona hafa. Ny didim-pitsarana ny fitsarana fanelanelanana izay mbola tsy ara-dalàna manan-kery mety ho niantso ny fitsarana ambony ao anatin'ny iray volana aorian'ny didim-pitsarana dia tonga ny fotoam-pitsarana ny fitsarana ny tany am-boalohany ny fahefana. Na izany aza, tsy misy vaovao ny fitarainana mety ho nametraka. Raha ny didim-pitsarana dia efa ara-dalàna manan-kery, izany dia afaka ny ho niantso ny fitsarana ambony tsy taty aoriana noho ny roa volana aorian'ny daty izay ny didim-panjakana ny fizahan-toetra ny fitsarana ny tany am-boalohany fahefana lasa ara-dalàna manan-kery. Ny fitsarana ara-barotra (nitranga fahiny ankehitriny fanelanelanana) nisy na dia mialoha ny revolisionera any Rosia. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana ny toe-javatra mahakasika ny varotra sy ny saram-ny fifanakalozana, toy izany koa ny fifandirana momba ny ara-barotra bankirompitra. Toy izany ny fitsarana dia nametraka tao Odessa, Moscou, Saint-Pétersbourg, Taganrog, Feodosia, Kerch, Arkhangelsk, Chisinau, ary Varsovie ary niasa mandra. Avy hatrany taorian'ny revolisiona tamin'ny ny fifandirana ara-barotra eo amin'ny orinasam-panjakana sy andrim-panjakana ao Rosia dia voarara ary ireo fa tapa-kevitra administratively. Na izany aza, tamin'ny fanelanelanana naniraka efa nanangana, tarihan'ny Faratampony Fanelanelanana Vaomiera ao amin'ny Filan-kevitry ny Asa sy ny Fiarovana. Avy ny ireo karazana fifandirana dia nandinika amin'ny fanjakana araka ny andrim-panjakana, izay noforonina araka ny didim-panjakana Foibe Komity Mpanatanteraka sy ny Filan-kevitry ny Olona Commissars ny firaisana sovietika. Nandritra izany fotoana izany, misy karazany roa ny fanelanelanana nisy: ny iray ao amin'ny sehatra ara-panjakana sy ny hafa eo amin'ny sampana iray amin'ny asa fanompoana.
Ny voalohany dia nanana ny fahafaha-mitsara raharaha iraisampirenena sy nandinika ny fifandirana eo amin'ny raharaham-barotra sy ny andrim-panjakana amin'ny ambaratonga isan-karazany ny hiérarchique ao anatin'ny orinasa iray, raha ny faharoa nikatsaka ny fahamarinana eo amin'ny fifandirana eo amin'ireo orinasa sy ny andrim-panjakana izay dia ambany ny iray amin'ny asa fanompoana.
Nanomboka tamin'ny taona, ny Fanjakana Fanelanelanana ny firaisana sovietika teo amin'ny lohany iray manontolo ny rafi-panjakana fanelanelanana sy ny fitsarana vatana izay ny firenena sy ny repoblika ireo ambany.
Ahoana no Manoratra ny Fifanekena Ho an'ny Fivarotana Ny Fiara - YourMechanic Toro-hevitra
Livello di istruzione della Relazione in Russia - Disposizioni Generali russi di Diritto del Lavoro - Avvocato russo di Consultazione on-line